वरिष्ठ न्यूरोसर्जन देवकोटा लन्डनमा अस्पताल भर्ना- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
वरिष्ठ न्यूरोसर्जन देवकोटा लन्डनमा अस्पताल भर्ना
लन्डन — नेपालका वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटा अकस्मात बिरामी परेपछि अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । देवकोटाको किंग्स कलेज हस्पिटल, डेनमार्क हिल, ब्रिक्टनमा उपचार भइरहेको लन्डनस्थित दूतावास स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
देवकोटालाई भेट्न राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदी समेत अस्पताल पुगेका थिए ।
निजी मामिलाका कारण देवकोटाको रोगबारे भने यकिन बताइएको छैन तर उनी एक्कासी अचेत भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको दूतावास स्रोतले उल्लेख गर्‍यो । अहिले उनी सामान्य अवस्थामा छन् । दूतावासले देवकोटाको राहदानीका खाली पृष्ठ सकिएर नयाँ लगिदिएको समेत बताइएको छ । देवकोटा सिकिस्त बिरामी भएर उपचार गराइरहेको भन्ने खबर केही अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहे पनि दूतावासले भने त्यसबारे केही जानकारी नभएको बताएको छ ।
सन् १९८९ मा बेलायतमा अध्ययनपछि नेपाल फर्किएर हजारौंको ज्यान बचाएका देवकोटा अहिले आफैं बिरामी भएपछि उनीप्रति सामाजिक सञ्जालमा सद्‌भाव र सहानुभूति बढेको छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा स्वास्थ्य, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री समेत भएका डा. देवकोटा वीर अस्पतालको पहिलो न्यूरोलोजिकल ट्रमा युनिटका संस्थापक हुन् । पछिल्लो समय उनी न्यूरो हस्पिटल, बाँसबारीका सञ्चालक छन् ।
देवकोटाले बेलायतकै अटकिन्सन मोर्ले हस्पिटल, ग्लास्गो (हाल सेन्ट जर्ज हस्पिटलको एक अंश)मा न्यूरोसर्जरीबारे विशेष प्रशिक्षण लिएका थिए ।
प्रकाशित : पुस ६, २०७४ १९:०७
मानव बेचबिखन गर्ने पक्राउ
काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अुनसन्धान ब्यूरोले मानव बेचबिखन मुद्दाका फरार अभियुक्तलाई सुनबहादुर तामाङलाई पक्राउ गरेको छ ।
नुवाकोट दुप्चेश्वरका तामाङलाई ब्युरोले नुवाकोटबाट पक्राउ गरेको हो । उनले २०७१ जेठमा नुवाकोटकै एक किशोरीलाई ललाई फकाई राम्रो काममा लगाई दिन्छु भन्दै भारतको दिल्ली पुर्‍याएर देह व्यापार गर्ने कोठीमा बेचेका थिए । बेचिएकी किशोरी कोठीबाट फुत्केर नेपाल फर्केपछि तामाङविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् ।
ब्यूरोले तामाङमाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सात दिनको म्याद थपी अनुसन्धान कार्य जारी राखेको छ । ब्यूरो स्रोतका अनुसार, तामाङले अन्य युवतीलाई पनि भारत लगेर बेचेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
प्रकाशित : पुस ६, २०७४ १८:४४